Fa maninona no mifidy ny orinasanao?
Voalohany ny vahoaka. Ekipa tena matihanina izahay ary vondrona injeniera efa za-draharaha amin'ity orinasa ity. Nahazo ny diplaomany tany UK ny lehibentsika izay mitondra fahitana iraisampirenena bebe kokoa noho ity mpanamboatra tilikambo ity. Faharoa ny serivisy, ho an'ity vokatra ity, ny mpanamboatra sy ny mpanjifa dia mila miresaka antsipirihany teknika maro. Manam-paharetana foana izahay hametraka fanontaniana ary hanome ny torohevitra arahinay amin'ny mpanjifa. Farany fa tsy farany, manome lanja be ny kalitao izahay. Ny fepetra takian'ny mpanjifa rehetra dia hihaona ary manolo-tena izahay hanome vokatra tsara ho an'ny mpanjifanay rehetra.
Ohatrinona ny tilikambo？
Miankina amin'ny karazana tilikambo ilainao ny vidiny. Ho an'ny karazana tilikambo isan-karazany dia mety ho hafa ny akora ary ny asa vita amin'ny karazana tilikambo sasany dia mety ho sarotra noho ny hafa. Izany no antony ilantsika mahita ny sarin'ny mpanjifa avy eo manome teny nindramina.
Ahoana raha tsy manana sary aho?
Raha tsy manana sary ny mpanjifa dia afaka manolotra karazana tilikambo natao ho an'ny mpanjifa voafidy isika. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, afaka manolotra sary mety tsara ho an'ny tilikambo izahay hamaly ny takian'ny mpanjifa. Raha sarotra ny tsipika fandefasana dia mbola manolotra serivisy famolavolana ho an'ny mpanjifantsika izahay.
inona ny kaomandy farany ambany?
Tsy manana kaomandy farany ambany izahay ary manaiky izay kaomandy avy amin'ny mpanjifa.
Mandra-pahoviana ny famokarana?
Raha ny mahazatra dia afaka manao ny entana voalohany isika ao anatin'ny iray volana. Ny fotoana famokarana dia tena miankina amin'ny isan'ny tilikambo ilainao.
Mandra-pahoviana ny andro fandefasana?
Ny fotoana fandefasana any amin'ny kaontinanta Eropa, Afrika ary Amerika dia manodidina ny 40 andro. Ho an'ny fanjakana ASEN, ny ora fanaterana dia manodidina ny 30 andro. Amin'ny ankapobeny, ny fotoana fandefasana dia maharitra roa volana.
Afaka mijery ny vokatra alohan'ny fandefasana azy ve ny mpanjifa?
Eny Mazava ho azy. Ny mpanjifa dia afaka manamarina ny vokariny amin'ny fotoana rehetra tadiaviny. Raha ny marina, tena raisinay ny mpanjifa hitsidika ny orinasa misy anay ary hijery ny vokatr'izy ireo alohan'ny fandefasana. Hanome mpanjifa 3 trano itoerana 3 andro izahay. Hanao fivoriana miaraka amin'ireo mpanjifa mitsidika anay ny mpitantana. Ny fanaraha-maso ireo vokatra tadiavin'ny mpanjifa dia horaisina.
Inona ny politikanao aorian'ny fivarotana?
Amin'ny ankapobeny, dia hanome serivisy rehetra azonay atao izahay hanampiana ny mpanjifa mandra-pivory tsara ireo tilikambo.
Mazava ho azy fa manaiky T / T sy L / C isika, 30% mialoha.